2000 – Year – Channel Myanmar
Kya Kehna (2000) မင္းသမီးေခ်ာ Preity Zinta ပါ၀င္တဲ့ ဒရာမာ ရိုမန္႔ အမ်ိဳးအစား မိသားစု ပညာေပး ရုပ္ရွင္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္.. ဇတ္လမ္း ပံုစံကေတာ့ ပရီယာ ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသူေလး ဟာ အိမ္ရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ေလး ျဖစ္ၿပီး အကို ၃ ေယာက္ ႏွင့္ အေဖ အေမ ႏွင့္ အတူ ေႏြးေထြး လွေသာ မိသားစုေလးမွာ ေနထိုင္ေနသူျဖစ္ပါတယ္.. ပရီယာ ကို တစ္ဖက္သက္ ခ်စ္ေနတဲ့ ငယ္ေပါင္းသူငယ္ခ်င္း အာေဂ်း ဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေလးလဲ ရွိေနျပန္ပါတယ္.. တစ္ရက္မွာေတာ့ ပရီယာ ဟာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးလို႔ သကၠသိုလ္ တက္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္း ရဲ႕ လူေခ်ာေလး ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္တဲ့ ရာဟူးလ္ နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္... ရာဟူးလ္ ဟာ ရႈပ္ေပြတက္သူ ပီပီ မိန္းကေလးတိုင္းကို အေပ်ာ္ႀကံရံုသက္သက္ပဲ ခ်စ္တက္သူပါ အဲ့ဒီလို လူကိုမွ ပရီယာ ...
Mission Impossible2(2000) မင်းသား Tom Cruise ရဲ့ Mission Impossible ဇာတ်ကားတွေထဲကမှ နံပါတ် ၂ ဇာတ်ကားပါ... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့....ဒေါက်တာ ဗလာဒီမာဟိုနိုဗစ်ဟာ အဖျက်စွမ်းအားအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ကိုက်မယ်ရာ လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကို မှားယွင်းတီထွင်မိပါတယ်..သူ့ကိုယ်သူအမှားလုပ်မိမှန်းသိလို့..ဖြေဆေးကိုပါ ပြန်ပြီး တီထွင်ပါတယ်..ပြီးတော့ ဒီဗိုင်းရပ်ကို မသမာသူတွေလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုသိလို့.. ဖြေဆေးရော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုယူပြီး အဝေးကိုထွက်သွားဖို့ကြိုးစားရမှာ သူ့ရဲ့အယုံကြည်ရဆုံးသူဖြစ်တဲ့ IMF အေးဂျင့် အီသန်ဟန့် ကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်..ဖြစ်ချင်တော့ အီသန်ဟန့်ဟာအဲ့အချိန်မှာ အားလပ်ရက်ယူနေတာဖြစ်ပြီး IMF အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လိုမှရှာမရတာမို့..အီသန်ဟန့်ရဲ့မျက်နှာ ဖုံးကိုတခြားသူမှာတက်ပြီးလူစားထိုးလွှတ်လိုက်ပါတယ်..အဲ့လူက လောဘတက်ပြီးသစ္စာဖောက်သွားတဲ့ အခါမှာ..အီသန်ဟန့်တစ်ယောက် ပြန်ပြီးဘယ်လိုုဗိုင်းရပ်ကိုယူမလဲ..စတဲ့စွန့်စားခန်းတွေနဲ့အတူ အက်ရှင်ကားအကောင်းစားတွေကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါကြောင်း..။Filesize : 619 MB Quality : BrRip720p Format : mp4 Run Time : 2hr 3min Subtitle : Myanmar Subtitle ( Hardsub ) Encoded By LK
Miss Congeniality 2000 Sandra Bullockရဲ ့ကားေကာင္းတစ္ကားနဲ ့မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ.... FBIေအးဂ်င့္ ဂေရ ့စ္ကမိန္းမဆန္ဆန္မေနတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ... မစ္ရွင္ေတြမွာလည္းမဆင္မၿခင္လုပ္ရပ္ေတြနဲ႕ၿပသနာရွာတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ... တစ္ေန ့မွာေတာ့ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဗံုးေဖာက္ရန္ႀကံစဥ္ေနမွဳအား အသြင္ေျပာင္းစံုစမ္းရန္ျဖစ္လာတဲ့အခါ...... သူ ့ရဲ ့နဂိုေယာက္်ားဆန္တဲ့အက်င့္ေၾကာင့္ အလွမယ္ေတြၾကားထဲမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေရာက္ရင္းတစ္လြဲတစ္ေခ်ာ္ျဖစ္ပံုေတြကိုဟာသေျမာက္စြာၾကည့္ရွဳရမွာပါ..... အလွမယ္ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲေန ့ကို ေဖာက္ခြဲသူေတြဦးတည္ခ်က္ထားမွန္းသိသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ဗံုးေဖာက္ခြဲသူကိုလက္ရဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ဆန္ခါတင္အလွမယ္၅ေယာက္ထဲပါဖို ့ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္လာပါေတာ့တယ္ ... ေအးဂ်င့္ ဂေရ ့စ္ကဘယ္လိုႀကိဳးစားမလဲ ဗံုးေဖာက္ခြဲမွဳကိုေရာ တားဆီးႏိုင္မွာလားဆိုတာ ရင္တမမၾကည့္ရမယ့္ ဟာသကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္..... Sandra Bullockရဲ့ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.... FBIအေးဂျင့် ဂရေ့စ်ကမိန်းမဆန်ဆန်မနေတတ်သူတစ်ယောက်ပါ... မစ်ရှင်တွေမှာလည်းမဆင်မခြင်လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပြသနာရှာတတ်သူတစ်ယောက်ပါ... တစ်နေ့မှာတော့ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို ဗုံးဖောက်ရန်ကြံစဉ်နေမှုအား အသွင်ပြောင်းစုံစမ်းရန်ဖြစ်လာတဲ့အခါ...... သူ့ရဲ့နဂိုယောက်ျားဆန်တဲ့အကျင့်ကြောင့် အလှမယ်တွေကြားထဲမှာ အမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ရင်းတစ်လွဲတစ်ချော်ဖြစ်ပုံတွေကိုဟာသမြောက်စွာကြည့်ရှုရမှာပါ..... အလှမယ်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲနေ့ကို ဖောက်ခွဲသူတွေဦးတည်ချက်ထားမှန်းသိသွားချိန်မှာတော့ ဗုံးဖောက်ခွဲသူကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ဆန်ခါတင်အလှမယ်၅ယောက်ထဲပါဖို့ကြိုးစားရန် လိုအပ်လာပါတော့တယ် ... အေးဂျင့် ဂရေ့စ်ကဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုကိုရော တားဆီးနိုင်မှာလားဆိုတာ ရင်တမမကြည့်ရမယ့် ဟာသကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.....Format…mp4 Duration....01:50:15 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator…Nway Khin Khin Encoder….Moe Myint Lwin Download with VIP Link Download with Pcloud Download with Openload
[21+] Cheeky (2000) Cheeky ဆိုတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးဟာ Comedy & Drama ဆိုပေမယ့် သာမန် 18+ ရုပ်ရှင်ကားတွေထက် အများကြီးဆိုးပါတယ် သတိပြုသင့်တာက မိသားစု နှင့် အတူ မကြည့်သင့်သလို 18 နှစ်အထက် အသက်ပြည့်ပြီးသူများသာ ကြည့်သင့်ပါတယ်... Unrated အမျိုးအစား ဖြစ်လို့ အကုန်လုံး မြင်သာထင်သာ ပြသထားတာမို့ ဆင်ဆာ မဖြစ်ထားပါဘူး... ဇတ်လမ်းပုံစံ ကတော့ ကာလာ ဆိုတဲ့ ချောမောလှပပြီး ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ အီတလီ သူလေးဟာ ရည်းစားများပြီး ပွေရှုပ်တက်သူပါ တစ်ရက်မှာတော့ မက်တဲယို ဆိုတဲ့ကျောင်းသား ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြိုက်မိသွားပါတယ်.... မက်တဲယို နှင့် သူမ အတူတူ နေထိုင်ဖို့ တိုက်ခန်း ရှာဖွေရင်း တိုက်ခန်းရှာဖွေပေးတဲ့ လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်လဲ ဇတ်လမ်းတွေ ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ် ဒါကို မက်တဲယို သိပေမယ့် မိန်းကလေး အချင်းချင်း မို့ ဘာမှ မပြောသေးပါဘူး တစ်ရက်မှာတော့ ကာလာ ရဲ့ အိမ်မှာ ...
[21+] Cheeky (2000)
Vertical Limit (2000) User Review အေနနဲ႔ "ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ အလန္းစားစြန္႔စားခန္းမ်ား" vote အမ်ားၾကီးရထားတဲ့ ဇာတ္ကားေလး တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္။ သင္ဟာစြန္႔စားခန္း ဇာတ္ကားေကာင္းေကာင္း ႏွစ္သက္မိရင္ လံုး၀ လက္မလႊတ္သင့္တဲ့ဇာတ္ကားပါ။ ကမၻာေပၚမွာ အျမင့္ဆံုးေတာင္ကိုေျပာပါဆိုရင္ ဧ၀ရက္ပါပဲ။ ဒုတိယ အျမင့္ဆံုးေတာင္ကို ေျပာပါဆိုရင္ K2 ပါတဲ႔ ေနာက္ျပီး အၾကမ္းတမ္းဆံုးေတာင္လဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြါးေရး ကုမၸဏီတစ္ခုက ေလယာဥ္ဖြင့္ပြဲကို စတန္႔သေဘာနဲ႔ျပခ်င္ေနပါတယ္ အဲဒါကေတာ့ K2 ေတာင္ထိပ္ေပၚကို ပ်ံ၀ဲ ျပမွာပါ ေတာင္တက္သမားေတြက အခ်ိန္မီွအေရာက္တက္ျပီး ေလယာဥ္ကို ေတာင္ထိပ္ေပၚကေန လက္ျပ ရမဲ့စတန္႔ပါ။ ေတာင္တက္သမားေတြက အေရာက္သြားႏိုင္ပါ့မလား? အားလံုးက ဘာမွ မွန္းဆလို႔မရသလို ယံုၾကည္လို႔လဲ မရႏိုင္ပါဘူး။ သိပ္ျပီး အမ်ားၾကီးညႊန္းဆိုမေနေတာ့ပါဘူး။ဒီဇတ္ကားကို ဘာသာျပန္ေပးထားသူကေတာ့ CM Translator Aye Min Oo ပဲ ျဖစ္ၿပီး အညႊန္းကိုလဲ သူကိုယ္တိုင္ ေရးေပးထားပါတယ္(သစ္ဆန္းခန္႔) HD Download (850MB) Small ...
Frequency (2000) Frequency (2000) IMDb - 7.3/10_____Rotten - 70% ရုပ်ရှင်အညွှန်းလေးကို မပြောပြခင် ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Video Type ခေတ်ကတည်းက ကြည့်ရှုခဲ့တာမို့ အဟောင်းတွေ ပြန်လည်တူးဆွရင်း ပြန်လည်တွေ့ရှိပြီး ဘာသာပြန် Moe Myint Lwin ကို ဘာသာပြန်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ယခု ကြည့်ရှုသူများလက်သို့ အရောက် အပ်ခဲ့ပါပြီ.... ဇတ်လမ်းရဲ့ ပုံစံကတော့ ဂျွန် ဟာ သူငယ်စဉ်ကတည်းက ဖခင်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အတွက် ဖခင်ဟာ အသက်ပေးသွားရသူပါ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး ဂျွန် ဟာ ဖခင် မေတ္တာငတ်မွတ်ခဲ့ရပါတယ်... ဂျွန် မှာ မိခင်ကြီးသာ ရှိပြီး အမေ နှင့်လဲ မတွေ့ဖြစ်တာ ပိုများနေပါတယ်... ဂျွန် ၏ အလုပ်မှာ ရဲစုံထောက်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကို ဖမ်းဆီးရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်... တစ်ရက်မှာတော့ ဂျွန် သူငယ်ချင်း နှင့် သူငယ်ချင်း၏ သားဖြစ်သူတို့ ဂျွန်အိမ်ကို လာပြီး ဖခင်ကြီး သိမ်းဆည်းသွားသော မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝန်ထမ်း သေတ္တာကို ဖွင့်စစ်ရာ ဖခင်ကြီး ...
Mohabbatein (2000) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၀၀ ပြည့််နှစ်အတွင်းမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဟင်ဒီဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးကို မြန်မာလို့ပြောရရင်တော့ "အချစ်လို့ခေါ်သလား" ပေါ့ဒီဇာတ်ကားမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ် မင်းသားကြီး အမီတာချ် ဘချမ်း နဲ့ ရှရွတ်ခမ်း တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ အရမ်းကိုစည်းကမ်းကြီးပြီး သူ့ရဲ့ကျောင်းမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်း မချစ်ရမကြိုက်ရရိုမန့်တစ်ဆန်ခြင်းတွေကို မလုပ်ရဆိုပြီး တားမြစ်ထားတဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ချစ်ကြိုက်မိသွားရာမှ ......သူတို့နှစ်ဦးကို မကွဲကွဲအောင်ခွဲ၊ တားမြစ်ကြပြီး ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့သမီးလေးအသက်ပါအစစ်ပါသွားခဲ့ရလေပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကောင်လေးက လက်စားချေဖို့ ဂီတဆရာအဖြစ်နဲ့ ကျောင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ....စည်းကမ်းအရမ်းကြီးတဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ အတ္တများနဲ့ အချစ်ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီး ချစ်တတ်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အားပြိုင်မှုတို့ကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာပဲ ဘယ်သူကအလေးသာမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါစို့ ......။(ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Iker Zawပဲ ဖြစ်ပါတယ်)